जो मुख, कुहिना र खुट्टाले लेख्छन् ! - VOICE OF NEPAL
२२ असार २०७६, आईतवार ०१:४९
250 ??? ???????
‘छोरालाई निकै महत्पूर्ण दिने सुदूपश्चिमेली समाजमा म जन्मिँदा भने बाआमाका अनुहारमा खुसी थिएन अरे,’ उनले भने, बोझ भएर जन्मिएकामा उहाँहरु हैरान हुनुभएछ ।’ उनी अर्थात नन्दराम भट्ट जन्मिँदै अपांगको सिकार बने ।
उनका हातखुट्टा पूर्ण थिएनन् । हात कुहिनासम्म र खुट्टा घुडाँसम्म मात्रै थिए । त्यतिबेला छिमेकले बाआमालाई खोलामा मिल्काउन सुझाएको कुरा उनले ठूलो भएपछि थाहा पाए । त्यतिबेला उनलाई दिक्दार बनायो । ‘न्वारानमा घरमा आएका आफ्न्त र छिमेकले त्यस्तो सन्तान पालेर के गछौ ? खोलामाा मिल्काइदेऊ भनेका थिए रे ,’ नन्दराजले भने ।
बाल्यकालमा उनी धेरैको ‘हेलाँ’ को पात्र बन्नुपर्यो । अहिले भने उनी अपांगता भएकाका लागि होइन, सबलांगहरुका लागि पनि प्रेरणादायी पात्र बनेका छन् । उनका दुवै हातखुट्टा अपूर्ण भए पनि संघर्षले सफलता चुमेको छ ।
स्नातकोत्तर गरेका उनी समाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचित छन् । जसले मुख, कुहिना र खुट्टाले लेख्छन् ।,